I-Villa ene-POOL YABUHLUNGU kwindawo ekhethekileyo yendalo eNerja - I-Airbnb
I-Villa ene-POOL YABUHLUNGU kwindawo ekhethekileyo yendalo eNerja
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRafael
URafael unezimvo eziyi-64 zezinye iindawo.
Ukuba udiniwe kukuphithizela kunye nengxolo yombindi wesixeko kwaye into oyifunayo ngeeholide zakho yindawo ezolileyo neyimfihlo kwiCosta del Sol kunye nemizuzu nje eli-15 ukusuka kumbindi weNerja ngemoto, le yindawo yakho efanelekileyo. . Ngalo lonke ubumfihlo, ukuzola kunye neembono ezintle ezithandwa yile villa yasemaphandleni, unokulibala ngazo zonke iingxaki kwaye uphumle kwiholide yakho.
Indawo ilungele abo bafuna ukuzola kunye nokuba bucala. Akukho propati idibana nesakhiwo se-villa ngoko ke ukuba ujonge ubumfihlo ilungile. Ikwakumgama oziikhilomitha ezi-4 ukusuka kwiilwandle ezimangalisayo ze-maro cliffs, ezingumbono omangalisayo wendalo kunye nendawo onokuthi uyindwendwele ngaphambi kokuphelisa ukuhlala kwakho eNerja. Ukuba uthanda imidlalo kwindalo, nokuba kukunyuka intaba, ukubaleka okanye ukukhwela ibhayisekile, le ndawo ikwayile nto uyifunayo, njengoko indawo izolile kwaye ineendlela ezininzi apho unokonwabela umdlalo owuthandayo.
I-villa yenziwe ngegumbi lokuhlala elikhulu apho kukho ukufikelela ngokuthe ngqo kwindawo ye-terrace. Le ndawo ineembono ezintle ezivulekileyo ezinokubonwa kwimifanekiso yentengiso. Igumbi lokuhlala linendawo yomlilo kwabo bafuna ukonwabela umlilo opholileyo ebusika. Ngokuqinisekileyo, i-villa nayo ine-air conditioning eshushu kunye nebandayo zombini kwigumbi lokuhlala kunye namagumbi amabini ukuze ipropati ihlale ikwiqondo lokushisa elikhethwe ngumxhasi.
Ngaphaya koko, ipropathi inamagumbi okulala amabini amabini, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela eli-2 eligcweleyo
Umphandle wendlu uphangalele kakhulu, sinokufumana phambi kwendlu indawo egqunyiweyo apho kukho itafile enkulu yangaphandle, kwelinye icala lendlu yindawo yephuli kwaye kwelinye icala indawo yeBBQ kunye nendawo yokupaka. .
Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye inayo yonke into oyifunayo ngokuhlala kwakho: izixhobo zasekhitshini, umatshini wokuhlamba, amashiti, iitawuli ...
Inombolo yomthetho: CTC-2017018199
Izinga lokuphendula: 77%
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$158
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Málaga